Koorona vaayirasii: Chaayinaan dhibee vaayirasii yaaddoo uume ittisuuf guyyoota 6'tti hospitaala ijaaraa jirti - BBC News Afaan Oromoo
Koorona vaayirasii: Chaayinaan dhibee vaayirasii yaaddoo uume ittisuuf guyyoota 6'tti hospitaala ijaaraa jirti
Goodayyaa suuraa Maashinoonni lafa hospitaalli itti ijaaramu qotuuf hiriiran
Kutaan bulchiinsa Chaayinaa Wuhaan jedhamu tibba kana vaayirasiin nama ajjeesaa jiru Koorona vaayirasi jedhamu keessatti mul'ate guyyoota 6 keessatti hospitaala sadarkaa isaa eeggate ijaaruuf akka jirtu beeksisfte.
Kutaan bulchiinsa Wuhaan kun hospitaala kana saffisaan ijaaruudhaaf kan murteessiteef koorona vaayirasii achitti mul'atee saffisaan gara biyyoota addunyaatti tatamsa'aa jiru wallaanuudhaaf.
Erga vaayirasiin kun kutaa bulchiinsattii keessatti mul'atee booda namoonni 830 ta'an kan qabaman yoo ta'u 80 ammoo sababii vaayirasichaa lubbuun isaanii darbeera.
Kutaan bulchiinsa Wuhaan namoonni miliyoona 11 keessa jiraatan kana keessatti namoota vaayirasii haaraa kanaan qabamanii wallaansa dhufaniin hospitaalonni biyyattii muddamtee hir'inni qorichaallee uumameera.
Akka sabaa himaaleen biyyattii gabaasanitti hospitaalli haaraan guyyoota 6 keessatti ijaaramu kun akka siree 1000 qabaatu taasifameetu ijaarmaa jira.
Akka viidiyoon waraabamee gadi dhiifame agarsiisutti maashinoonni qotan bakka hospitaalichi itti ijaaru gahanii hojiitti jiru.
Hospitaalli amma hojjetamaa jiru kun kan kanaan dura bara 2003 dhukkuba 'Sars' jedhamu wallaanuuf jecha kan Beejiingitti ijaarame waliin walfakkaata jedhameera.
Oduun kun erga dhaga'amee namoonni hedduun yaada isaanii kennaa jiru. "Chaayinaan rakkoon waqtaawaa ta'e yeroo ishee mudatutti saffisaan fala barbaachuutti kan hamatamtu miti," jechuun hogganaan dhaabbata fayyaa idil-addunyaa Yaanzuung Huwaang dhugaa baheeraaf.
Akka isaan jedhanitti hospitaalli bara 2003 keessa Beejiingitti ijaarame guyyoota torba keessatti xumurame. Hospitaala kanas guyyoota jedhame kana keessatti xumuruudhaaf wanti rakkisu hin jiraatu.
"Murteen kun aanga'oota gara olii jiran irraa waan darbeef rakkoo xaxaa biirookiraasiifi faayinaansii waan hin qabaanneef wantonni barbaachisanis gahumsaan waan dhiyaatuufiif hospitaala kana ijaaruun guyyaa jedhame keessatti ni xumurama," jechuun amanataa qaban ibsaniiru.
Goodayyaa suuraa Dubartii erga dhibee SAARSuuf wal'aansa argattee booda bahaa jirtu
Yeroo ammaa kana maandiisonni guutummaa Chaayinaa irraa walitti qabamaniiru- Chaayinaan maandiisummaan ammoo hedduu biyya milkaa'ina guddaa qabdudha.
Tarii biyyoonni addunyaa gama Lixaa kana amanuu dhiisuu danda'u. Haa ta'u malee, kun akka dhugaatti milkaa'u mirkaneeffachuudhaaf guyyoota 6 qofa eegaa jechuudhaan saffisa maandiisota Chaayinaa dinqisiifataniiru.
Kun erga ta'een booda ammoo kutaan bulchiinsa Wuhaan kun qoricha hospitaalota dhiyoo jiranirraa ykn ammoo kallattiidhaan warshaa irraa fichisiifti jechuudha.
Bara 2003 keessa vaayirasiin Chaayinaatti mudatee ture wallaanuudhaaf jecha Hospitaalli Zhiyaahotaangishaan Beejiing keessatti ijaaramee ture.
Addunyaa kana irrattis ijaarsa saffisaan xumurame ta'uudhaan guyyoota 7 keessatti ijaaramee xumurame.
Vaayirasii Chaayinaa haaraa: Vaayirasichi namatti daddarbuunsaa erga mirkanaa'ee booda namoonni afur du'an
Vaayirasiin hin beekamne Chaayinaatti argame namoota hedduutti daddarbaa jira
19 Amajjii 2020